Real Madrid oo baacsaneysa mid ka mid ah weeraryahannada xulka qaranka England… (Iska illow Harry Kane) – Gool FM
(Madrid) 20 Juun 2021. Kooxda kubadda cagta Real Madrid macallinkeeda cusub ee Carlo Ancelotti ayaa baadi goob ugu jira saxiixa weeraryahan cusub suuqa xagaagan isagoo aagga bartilmaameedkiisa ka dhigtay dalka Ingiriiska.
Macallin Ancelotti ayaa haatan si aad ah u doonaya inuu Madrid kusoo biiriyo weeraryahanka naadiga Everton ee Dominic Calvert-Lewin kaasoo haatan qayb ka ah xiddigaha xulka qaranka England u matalaya tartanka qarammada qaadda Yurub.
Labada nin ayaa si qurux badan uga soo wada shaqeeyay garoonka Goodison Park fasalka dhammaaday ee 2020-21, waxaana 24-sano jirkan uu dhaliyay 21 gool isagoo dhammaan tartammada saftay 39 ciyaarood, waxaana goolaash 16 ka mid ah uu ka dhaliyay Premier League.
Sida laga soo xiganao wargeyska The Sun, Macallinka Taliyaaniga kasoo jeeda ayaa doonaya inuu Calvert-Lewin kula midoobo Los Blancos xagaagan, waxaana wararku ay intaas ku darayaan inay 50 milyan oo gini ku filan tahay kooxda Ingiriiska ah in lagu qanciyo si looga soo qaato xiddigan.
Keliya xiddigan ma ahan weeraryahannada ay Real Madrid ka dooneyso Premier League xagaagan, waxaa sidoo kale bartilmaameed u ah laacibka kooxda Chelsea ee Timo Werner.
Calvert-Lewin ayaa Everton kula jira qandaraas dhici doono bisha June ee sanadka 2025, waxaana uu kooxdiisa u saftay 173 dhammaan tartammada isagoo meel diiwaankeeda ku qortay 53 gool iyo 15 caawin.